> Resource > Transfer > 2 Siyaabaha Bedelka Faylal ay ka Fiiro 2 ilaa 3 Ogow
About inay soo gaaray Note Samsung 3 iyo rabto in aad ogaato sida ugu wanaagsan ee wax walba wareejiyo ka Samsung Fiiro 2 leh? Si aad u wareejin files warbaahinta, dhihi videos, muusig iyo sawiro leh, kaliya aad u baahan tahay fiilooyinka USB. Marka ay timaado in wareejinta Guda wac, barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah iyo kuwa kale in ay ku kaydsan yihiin kaadhka xusuusta telefoonka, waxaad u baahan tahay in ay taageero ka qaar ka mid ah qalabka xisbiga saddexaad barbaro. Wondershare Ayaa sii daayay laba qalab awood badan. Mid ka mid ah waa Wondershare MobileTrans , kaas oo la qorsheeyay in uu caawiyo files ka Fiiro 2 wareejiyo Fiiro 3 click ah. Kale waa Wondershare MobileGo for Android , tababare Android, kaas oo aad kartaa waxyaabaha ku saabsan gurmad Fiiro 2 una soo celiso Fiiro 3.
Habka 1: Mid ka mid ah click si ay u gudbiyaan files ka Fiiro 2 ilaa 3 Ogow
Habka 2: Soo Celinta Note 3 ka Ogow file 2 gurmad
The Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac aad bixisaa sida ugu dhaqsaha badan inay ku dhameystaan ​​Fiiro 2 si Fiiro 3 file kala iibsiga. The files kuu soo gudbin karaa waa barnaamijyadooda, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, abuse wac, videos, sawiro iyo music. Hadda, download qalab iyo hubi tallaabooyinka fudud ee hoose.
Qaybta soo socda ay diiradda files ka Samsung Fiiro 2 gudbaayo Fiiro 3 version Windows. Dadka isticmaala Mac, waxaad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah.
Tallaabada 1. Connect Fiiro 2 iyo 3 Ogow in kombiyuutarka
Ka qaada xadhko USB iyo xirmaan Fiiro 2 iyo 3 Ogow in kombiyuutarka. Markaas, aad arki doonaa suuqa kala hoose. Guji Start si ay u tagaan suuqa kala iibsiga telefoonka. Connect aad Note Samsung 3 iyo 2 Ogow in computer la fiilooyinka USB.
Tallaabada 2. Switch files ka Fiiro 2 in la ogaado 3
Sida shaashada Isbedelka, Wondershare MobileTrans ku siiyo awood uu ku wareejiyo dhammaan dadka ay khuseyso, barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah, jadwalka taariikhda, abuse wac, music, sawiro iyo videos ka Fiiro 2 ilaa Fiiro 3. Dhammaan waxa ay saxday. Riix Start Copy si ay u bilaabaan kala iibsiga faylka.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo version Windows ah, waxa kale oo aad soo celin kartaa Note Samsung 3 ka Fiiro 2 gurmad file.
Haddii aad jeceshahay in gurmad aad Fiiro 2 iyo soo celinta file gurmad ah in la ogaado 3, ee Wondershare MobileGo for Android waa mid kugu habboon. Waa aalad hal dukaan maamulka ee telefoonada Android iyo murriyado, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad files gurmad oo dhan ama soo xulay Fiiro 2 ka dibna loo soo celiyo si ay Ogow 3.
Tallaabada 1. Isku Fiiro 2 in computer iyo ordi qalab
Si aad u xirmaan Fiiro 2 kombiyuutarka, waxaad leedahay laba fursadood: cable USB ama WiFi. Dooro mid ka mid ah si ay u sameeyaan Fiiro 2 xiran. Markaas, files ku Fiiro 2 lagu soo bandhigi doonaa galeeysid ka tagay ee suuqa hoose.
Tallaabada 2. kaabta Fiiro 2 ilaa kombiyuutarka
Riix One-Guji kaabta . Daaqadda pop-up ka, iskaan faylasha aad rabto in aad gurmad. Haddii aadan rabin in gurmad wax, kaliya aad u baahan tahay inaad uncheck. Ka dib markii in, guji Back Up . File ayaa kaabta badbaadi doonaa kombiyuutarka. By default, faylka gurmad waxaa badbaadiyey ee D: \_ Documents \_ Wondershare \_ MobileGo \_ kaabta. Waxa kale oo aad dooran kartaa gal ah oo u badbaadin doonaa.
Tallaabada 3. Connect Note 3 ilaa kombiyuutarka
Connect Note 3 kombiyuutarka wirelessly ama la cable USB ah. Sida Fiiro 2, aad barkinta karo ama waxaa ku xirmaan. Sidoo kale, qalab ayaa lagu ogaan doonaa Note 3 oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 4. Soo Celinta Note 3 ka Fiiro 2
Under aad Note 3 category on galeeysid bidix, guji Qalabka . Daaqadda xidhmo ah, guji soo celi . Window A booda, aad muujinaya dhan files gurmad aad weligaa dhigay. Dooro mid ka mid dambeeyay oo guji soo celi.
Dhab ahaantii, qalabka taageertaa wareejinta faylasha u dhexeeya Fiiro 2 iyo 3 Ogow sida Wondershare MobileTrans ah. Sida Fiiro 2 category, guji mid file category on galeeysid bidix, dooro faylasha aad doonayay oo Midigta iyo markaas dhoofin in Note 3.
Sidee si ay u gudbiyaan Phone Xiriirada u dhexeeya Android, macruufka iyo Symbian
Kabsado Photos markii laga soo wareejiyay Camera in Computer